Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Olona 3 no maty, 99 tsy hita tao amin'ny fianjerana condo any Miami
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Olona 3 no maty, 99 tsy hita popoka tao amin'ny condo Miami
Ny ben'ny tanàna Surfside Charles Burkett dia nanamafy fa farafaharatsiny olona iray no maty ary 10 no naratra.
Trano condominium 12 rihana nianjera tao amin'ny tanànan'i Surfside avaratry Miami.
Amin'ireo singa 130, sahabo ho ny antsasany no voalaza fa voakasiky ny fianjerany.
Lehiben'ny mpamonjy voina mpamonjy voina any Miami-Dade County Ray Jadallah dia nilaza fa olona 35 no navotana avy tao amin'ilay trano.
Notaterin'ny tompon'andraikitra Florida fa farafahakeliny olona telo no maty ary olona 99 hafa no tsy tratra noho ny firodanan'ny trano condominium 12 rihana tao amin'ny tanànan'i Surfside avaratry Miami.
Ny Champlain Towers South dia fampiroboroboana condo amoron-dranomasina natsangana tamin'ny 1981 tao amin'ny zoro atsimo atsinanan'i Surfside. Izy io dia nanana efi-trano roa misy efitra roa atsy an-tsena amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fangatahana $ 600,000 ka hatramin'ny $ 700,000 amin'ny faritra iray miaraka amin'ny fahatsapan'ny mpiara-monina izay manome fifanoherana lehibe amin'ny glitz sy ny fahasarotan'ny South Beach akaiky.
Raha ny filazan'ny Miami Herald dia manana trano rahavavy roa izy, Champlain Towers North ary Champlain Tower East
Amin'ireo singa 130, manodidina ny antsasaky ny voalaza voakasiky ny fianjerana.
Ny ben'ny tanàna Surfside Charles Burkett dia nanamafy fa farafaharatsiny olona iray no maty ary 10 no naratra. Lehiben'ny mpamonjy voina mpamonjy voina any Miami-Dade County Ray Jadallah dia nilaza fa olona 35 no navotana avy tao amin'ilay trano.
Ny tilikambo dia misy fifangaroan'ny mponina mandavantaona sy mandavantaona, ary na dia mitazona vatan-kazo vahiny aza ny tranobe, dia tsy manara-maso izany raha mipetraka ny tompony,
Tsy nilaza ny mety nahatonga ny fianjerana ireo tompon'andraikitra. Tamin'ny horonan-tsary nalaina avy teo akaiky teo dia toa nianjera aloha ny afovoan'ilay trano, niaraka tamina faritra akaiky ny ranomasina ary nidina segondra taty aoriana rehefa nisy rahona be vovoka nitelina ny manodidina.
Nisy ny asa natao teny an-tampon'ilay tranobe, saingy nilaza i Burkett fa tsy hitany izay nahatonga izany.
Tao amin'ny toerana famindrana olona napetraka tao amin'ny foibem-pokontany akaiky dia nivory ny olona mipetraka amin'ny tranobe mifanila amin'ny fianjerana rehefa nasaina nitsoaka izy ireo. Ny sasany nitomany. Ny sasany mbola nanao akanjo baoty. Nisy ankizy nanandrana natory tamin'ny tsihy niparitaka tamin'ny tany.
Nilaza ny governora Florida Ron DeSantis fa handeha any South Florida izy amin'ny alakamisy izao. "Miomana amin'ny vaovao ratsy izahay noho ny fahavoazana hitanay," hoy izy nampitandrina, ary nilaza fa nihevitra izy fa ny valiny haingana avy amin'ireo sampan-draharaha maika dia namonjy ain'olona.